Wenger Oo Shaaciyay Kooxda Ugu Cad-cad Inay Ku Guuleysto Xagaagan Tartanka Europa League %
EnglandEuropa LeagueLatest Sports News
Iyadoo la sameeyay isku aadka wareega Sideed dhamaadka ee tartanka Europa League, ayaa wuxuu macalin Arsena Wenger, uu shaaciyey kooxda ugu cad-cad inay ku guuleysto sanad ciyaareedkan koobka labaad ee Yurub ugu xiisaha badan.
Isku aadka wareega Sideed dhamaadka Europa League, ayaa waxaa kasoo baxay kooxo waa weyn, iyadoona ay Arsenal ku wajahayso wareegaan dhigeeda CSKA Moscow, kuwaasoo ka dhisan wadanka Spain, ayna mid aad u halis ah.
Wenger, oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aan la sameyn isku aadka, islamarkaana ahayd kadib guushii ay kasoo gaareen AC Milan, markaasoo ay kusoo dharbaaxeen 3-1, ayaa wuxuu sheegay in Atletico Madrid, ay tahay mida loo saadaalinayo qaadista koobkaan.
Mar la weydiiyay hadii uu jeclaan lahaa inay ku aadaan Atletico Madrid, kadib ciyaartii AC Milan ayuu tababaraha reer France ee Wenger ku jawaabay: “Qof walba wuxuu jecel yahay inuu ka fogaado ku aadista Atletico Madrid.
“Maxaa yeelay, waxaa laga yaabaa inay yihiin kooxda ugu weyn oo ay ugu cad-cadahay inay ku guuleysto [Europa League],” ayuu sii raaciyay.
“Laakiin, si walba oo ay noqoto, hadii aysan dhicin midaas, wax badan kama dhigna, maxaa yeelay aniga wax saameyn ah kuma lihi,” ayuu sii daba dhigay.
“Waan aragnaa sida uu xaalku noqdo, waana arki doonaa kooxda aan ku aadno, hadii aan ku aadno Atletico Madrid, waan aan ku aadnay,” ayuu macalinka kooxda Woqoyga London ka dhisan ee Gunners-ka, kusoo gaba gabeeyay hadalkiisa.